Monday August 10, 2020 - 09:30:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay weerar aad u qorshaysan oo kooxo hubaysan ay ka fuliyeen wadanka Niger ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
Ugu uyaraan 8 qof oo ubadan Faransiis ayaa dhintay kadib markii dablay hubaysan ay weerareen seero lagu xanaaneeyo xayawaanka Geriga taas oo ku taal meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee Niamey.
Mas'uul katirsan dowladda Niger ooo lagu magacaabo Ibraahiim Katitiila ayaa wakaaladadda wararka AFP u sheegay in 6 qof Faransiis ah iyo laba qof oo udhashay dalka Niger ay ku dhinteen weerarka oo ka dhacay meel 65 KM magaalada Niamey.
Dablayda weerarka geysatay oo watay mootooyin dhug dhugleey ah ayaa kasoo baxay dhulka howdka ah ee kaabiga ku haya deegaanka Kooryah, sida wararku sheegayaan ragga weerarka fuliyay ayaa toogasho ugeystay dalxiisayaasha Faransiiska ah balse mid kamid ahaa dadka caddaanka ah oo isku dayay in uu baxsado ayaa gowrac lagu dilay.
Dowladda Niger oo dabadhilifad u ah Faransiiska waxay sheegtay in ay waddoo baaritaanno ku aaddan qaabkii ay wax udhaceen, Niger ayaa kamid ah dowladaha ku midaysan isbahaysiga Faransiisku ka dhisay mandiqadda Saaxilka ee loo yaqaan G5.